Hery - Tsiky dia ampy | Febroary 2010 |
Tsy haritro ny tsy hitantara ny zava-nisy tamin'iny weekend iny. Tany Paris sy Rouen dia hitako hoe nifangaro ny vahona sy ny tantely, ny fahanginana sy ny kotaba, ny tomany sy ny tsiky, ny fahakiviana sy ny fanantenana... fa nandresy hatrany iretsy faharoa. (tohiny)
Nandalo FB fa mbola Aoka ihany... indray
2010-02-22 @ 12:42 in Izaho sy ny ahy
Taorian'ilay takariva ho an'i Shoan tany Paris tamin'ny zoma teo sy ny dianay tany antranon'i Shoan tany Rouen tamin'ny asabotsy dia fantatro fa tsy maintsy ho ao amin'ny FB no hahitana ny sary voalohany. Tsy nahita sary tamin'ny sisiny mihitsy aho toy ny Flickr, Picasa sns... na dia ireny aza no toerana tena fitehirizana sary :-)
Dia voatery nandalo kely tao aho io atoandro io... fa mbola tsy hitako daholo akory ny sary dia efa maika aho ny nanidy azy. Tena tsy resaka tsy fitiavana FB fa mikorontana be fotsiny ny saiko amin'ilay izy :-) Sady ohatran'ny niova be izany.
Koa mba ampitampitao ny sary fa tsy poinsa le miditra ao e... tena mitalaho :-p
Sambasamba misy lanezy eto Roma
2010-02-12 @ 09:37 in Izaho sy ny ahy
Zavatra tsy fahita firy eto Roma itony ka mila tehirizina. Tamin'ny 2003 no nahatsiarovako hoe nisy lanezy nanify dia nanify izay tonga dia levona. Dia androany indray vao mba nisy an'izany lanezy izany teto Roma. Ary tena be dia be mihitsy. Misy kotroka koa aza. Ireto ny sary vitsivitsy fanombohany fa halaiko tsikelikely avy eto am-piasana eto ihany ny fivoarany.